Blogger Of This Week: Santosh Neupane - MeroReport
Blogger Of This Week: Santosh Neupane
सन्तोष न्यौपाने, मूलघर कपिलबस्तुको पिपरामा रहे पनि हाल बेल्जियममा बस्नुहुन्छ । पाँचबर्षअघि नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूटबाट तीन महिने पत्रकारिता तालिम लिइ तिलोत्तमा दैनिकबाट पत्रकारिता शुरू गर्नुभएका न्यौपानेले हाल उज्यालो एफएम, न्यूज २४ र विश्वन्यूज डटकमका लागि बेल्जियमबाट संवाददाताको रूपमा काम गर्नुहुन्छ । मेरोरिपोर्टमा नियमित योगदान गर्नुहुने सन्तोष यो साता मेरोरिपोर्टमा साताको ब्लगर हुनुहुन्छ । सधैका साताको ब्लगरसँगजस्तै उहाँसँग पनि ब्लगिङ्गका सन्दर्भमा कुराकानी गरिएको छ ।
के का लागि ब्लग लेख्नुहुन्छ ?
समाचारमा आइनसकेका कुराहरु लाई आफनो स्वतन्त्र रुपमा विचार पोख्ने थलो नै ब्लग हो भन्ने मलाई लागेको छ । आफुले सजिलै खोल्न सकिने ब्लगमा आफुलेचाहेका कुराहरुलाई टिका टिप्पणि सहित प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सुरुमा मलाई माइसंसार को ब्लगले आकर्षित बनाएको थियो । म समाचार मा आउन नसकेका तर महत्व राख्ने विषयवस्तुलाई पाठक वर्ग समक्ष ल्याउन तथा आफना रचनाहरुलाई बाहिर ल्याउनको लागि ब्लग लेख्ने गरेको छु।
आफना ब्यत्तिगत रचनाहरु कथा कविता तथा प्रकाशित समाचार लगायत समाजमा लुकेर रहेका तर जनमानशमा महत्व राख्ने कुराहरुलाई ब्लगमा लेख्नु मेरो रुचिको विषय बनेको छ । जसले गर्दा त्यस्ता ब्यक्ति या कुनै सम्बन्धित स्रोत लाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुगोस ।
नेपालमा ब्लग लेखनलाई हेर्ने दृण्टिकोण फरक फरक प्रकारको रहेको छ । कोहि यसलाई राम्रो र भरपर्दो रुपमा लिन्छन भने कोहि ब्यक्तिगत विचार पोख्ने थलोको रुपमा लिने गरेका छन । तर युरोपको केशमा हेर्ने हो भने ब्लगमा नै पोस्ट गरिएका कुराहरुलाई स्रोत बनाइ राण्ट्रिय स्तरका मिडियाले स्थान दिइरहेका हुन्छन । तसर्थ ब्लगमा पोस्ट गरिएका अधिकांश समाग्रिहरु स्तरिय रहेका हुन्छन भन्ने बुझनु जरुरि रहेको छ । जसले गर्दा ब्लग प्रति रहेको खराब धारणालाई निर्मुल पार्दछ ।
तपाईसँग ब्लग लेख्दाको त्यस्तो कुनै रमाइलो अनुभव छ भने बताइ दिनुस न ?
सुरुका दिनहरुमा ब्लग लेख्दा को कसको कति कमेन्टस कसरि आउछ भन्ने उत्सुकता रहन्थ्यो ।र त्यहि अनुशार आफुलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्थ्यो । रुपन्देहिको देवदहमा एक दाइजो पीडित महिलालाई आफनै पतिले मट्टितेल खनाएर जलाएको समाचार लाई मैले ब्लगमा पोस्ट गरेको थिए जस्को फलस्वरुप ति महिलाको पक्षमा धेरै संघसस्थाहरुले वकालत गरेका थिए।पछि उक्त समाचार राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको थियो जुन मेरो लागि खुशीको विषय बन्यो ।
तपाईंले त मुलधारको पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ । नेपालमा पत्रकारिता पेसा कत्तिको सजिलो छ ?
नेपालमा पत्रकारिता पेशा त्यति सहज छैन । समाजिक रुपमा जबसम्म पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्न सकिदैन तबसम्म पत्रकारहरु पुरानै अवस्थामा रहने निश्चित रहेको छ । जे पनि पत्रकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने मानयता छ । केहि गलत तथा अस्पष्ट स्रोतका अनुसार समाचार प्रकाशित हुदा बित्तिकै समाचार लेख्ने पत्रकार मात्रै होइन उ सम्बन्धित संस्थानै बेइज्जतिको सिकारमा पर्दछ । जसले गर्दा पत्रकारलाई मानसिक तनाव तथा आफनो पेशाप्रति घृणा उत्पन्न हुने गर्दछ । अर्को तर्फ पत्रकारले आफनो पारिश्रमिकबाटै सम्पुर्ण कुराहरुको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यसलाई सहज बनाउनको लागि सरकारले केहि पहल गर्नैपर्छ ।
नेपालको पत्रकारितालाई हेर्दा यो पेसामा टिक्न कत्तिको सजिलो देख्नु भएको छ ?
नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा पत्रकारितालाई सुधारात्मक बाटोमा लैजाने हो भने टिक्नको लागि सहज नै रहेको छ । एक पत्रकार एउटामात्रै मेडियामा काम गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । मोफसलको अवस्था त अझै दयनिय नै रहेको छ । सबै मिडिया हाउसहरु विज्ञापनमा बाचिरहेका छन । पत्रपत्रिकाको प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा विज्ञापनको रकममा पनि बार्गेनिङ अबश्य हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा श्रमजिवी पत्रकार परिरहेका छन । तलब समयमा नपाउने, तलबको स्केल नहुने मु्ख्य समस्या हुन । अब बेल्जियमको कुरा गर्ने हो भने पत्रकारलाई अधिकासं कुराहरुमा सरकारले छुट दिइरहेका छ जसले गर्दा उनिहरुको जिवनयापन सहज छ । एउटा खोजी समाचार लेख्नेले आफनो जिविका धान्न सक्ने राम्रो रकम प्राप्त गर्न सक्दछ ।एउटा श्रमजिवी फोटो पत्रकारले एउटा फोटोकै ३ सय युरो देखि माथि सम्म रकम प्राप्त गर्दछ । तसर्थ नेपालमा पनि पत्रकारलाई ब्यवस्थित गर्नको लागि सरकारि तवरबाट केहि पहल हुनु जरुरि रहेको छ ।
एउटा पत्रकारको नाताले भन्नु पर्दा नेपाली पत्रकारहरुले अहिले कस्ता-कस्ता चुनौतिहरु भोग्नुपरेको छ ?
पत्रकारले आफनो स्वतन्त्र पुर्वक समाचार लेख्न सक्ने अवस्था छैन । कठिन विषयवस्तु उठाउनु परयो भने तरबारको धारमा रहेर लेख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । डर, धाकधम्की त पत्रकारको लागि सामान्य विषयवस्तु भइसकेका छन । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारको ज्यान लिइरहेका छन । गुण्डागर्दि ,ठगि,चोरी,फटयाइका समाचार लेखेपछि भोलि पत्रकारको ज्यान लिने धम्कि आउने निश्चित नै छ । यसमा न त सरकार नै सशत्त रुपले बोल्छ न त नेपाल पत्रकार महासंघ नै । पत्रकारको हकहित संरक्षणको लागि कडा कानुन ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको छ ।
मुलधारको पत्रकारिता र ब्लग लगायत मार्फत गरिने नागरिक पत्रकारिता बिच के फरक पाउनुभएको छ ?
मुलधारको पत्रकारिता सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्र्रित रहेर मात्रै समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ । असल पत्रकारले समाचारमा आफनो विचार कहिलेपनि राख्दैन यदि राखि हाल्यो भनेपनि पाठकवर्गलाई थाहा नहुने गरि राख्दछ । तर ब्लग भनेको समचारलाई विस्लेण्ण गर्दै आफना विचार प्रस्तुत गर्ने थलो हो । जसले गर्दा पाठकवर्गको भित्रि खुल्दुलि लाई मेटाउन सहज बनाउछ ।
मेरो रिपोर्ट भन्दा अगाडि मैले विश्व भरका पत्रकारहरुको संगठित साइट भवअ यलष्लिभ वयगचलबष्किअयगलष्तथ मा सदस्य भई त्यसमा आफना विचार पोख्ने गरेको थिए र पछि साथिहरुको माध्यमबाट मेरो रिपोर्ट संग सम्पर्क बढयो । त्यसपछिका दिनहरुमा मेरो रिपोर्टमा निरन्तर लेखिरहेको छ्ु । मेरो रिपोर्ट नेपालबाट प्रकाशित नेपालि पत्रकार तथा ब्लगरहरुको साझा चौतारिको रुपमा मैले लिएको छु । विदेशमा रहेका नेपालिहरुका गतिविधिलाई स्वदेशमा लैजानु र प्रचार प्रसार गर्नु मैले मेरो प्रमुख कर्तब्य ठानेको छु । जसले गर्दा उनिहरुलाई थप हौसला मिलेको छ । नेपालि जति विदेशमा बसेपनि उसले आफनो स्वाभिमान पाउने भनेको स्वदेशमा नै हो भन्ने मेरो ठम्याइ रहेको छ । यसमा मेरा सम्पुर्ण विचार र समाचार स्वदेशमा रहेकाहरुले अध्ययन गर्ने हुनाले पनि मैले निरन्तर लेख्ने गरेको हु ।
तपाइको ब्लगलिँक : ...www.nepalplus.com
मेरोरिपोर्टमा सन्तोषको प्रोफाइल पेजः http://meroreport.net/profile/santoshneupane
Comment by Bhumika Ghimire on June 9, 2011 at 5:44pm
congratulations santosh ji. i have posted short english version of ur profile at nepal blogs
Comment by MadhuSudhan Guragain on June 8, 2011 at 5:11pm
बधाइ छ सन्तोषजी ।
Comment by Mukunda Nepal on June 8, 2011 at 12:30pm
Comment by Equal Access on June 8, 2011 at 12:13pm
Congratulation Santosh Ji!!!!